Hadaladii madaxweyne Farmaajo uu maanta ka jeediyay degmada Afgooye (DHAGEYSO+SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hadaladii madaxweyne Farmaajo uu maanta ka jeediyay degmada Afgooye (DHAGEYSO+SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo maanta safar dhanka dhulka ah ku tagay degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa la kulmay maamulka iyo waxgaradka degmadaas.
Madaxweynaha ayaa dhageystay tabashooyinkii iyo tallooyinkii ay usoo jeediyeen odayaasha dhaqanka, culumada, haweenka iyo dhallinyarada degmada Afgooye, waxa uuna sheegay inay dowladda si degdeg ah wax uga qabaneyso waxyaabaha ay tabanayaan.
“Marka aan hadalkiinna dhageystay waxaa iisoo baxday in seddax arrimood ay degmadaan u baahan tahay, waana dib u heshiisiin, dib u dhis iyo dib u xoreyn, waxaana seddaxdaas aasaas u ah caddaaladda. Dowladdaan waxay ballan qaaday dib u heshiisiin, waxayna ka bilaabaysaa degmada Afgooye haddii Alle idmo.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dadka ku labisan dharka ciidanka ee isbaarooyinka taagan lagu qaban doono gacan bir ah, waxa uuna intaas raaciyay in askarigii lagu helo isaga oo shacab dhibaateynaayo in la horgeyn doono maxkamadda ciidamada.
“Maanta laga bilaabo qofkii lagu arko isaga oo isbaaro taagan naga mid ma aha, haddii aad aragtaan qof lacag idinka aruursanaya waan la wada dagaallameynaa ee noo soo sheega, ma jiri doono qof dhar ciidan wata oo isbaaro dad ku dhici kara, ciidamadeenna annaga ayaa xuquuqdooda iyo mushaarkooda inaan bixinno diyaar u ah.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa ammaan u jeediyay wiilasha iyo gabdhaha ka tirsan ciidamada qalabka sida ee ku jira safafka hore ee dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah, isaga oo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay si dhaw ula shaqeeyaan ciidamada.
Ciidamada qalabka sida waxay kusoo shaqeeyeen mushaar la’aan iyo daryeel la’aan haysata naftooda iyo tan qoysaskooda, iyada oo ay waxyaabahaasi jiraan ayay haddana hortaagnaayeen, walina hortaagan yihiin qoladaan inkaarta qaba ee Al-shabaab.” Ayuu madaxweyne Farmaajo hadalkiisa raaciyay
Safarka madaxweyne Farmaajo uu ku tagay degamada Afgooye ayaa waxaa ku wehliyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, wasiirka gaashaandhigga C/rashiid C/laahi Axmed, xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo kasoo jeeda degaanadaas iyo taliyeyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka.